chitkoko – Ck4Ubuntu
ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ လေ့လာစရာ websites များ
July 15, 2017 chitkoko	Leaveacomment Community, Creation, DIY, Learning, Software
ကျွန်တော်တို့သည် မိမိတို့ ဝါသနာပာရာတို့ကို အချိန် နှင့် အမျှ လေ့လာချင်ကြပါသည် ။ထို့ကြောင့် သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ဖြစ်သူ Victoire Rio ၏ အကူအညီဖြင့် သိခဲ့ရ ပြီး ပြန်လည်လေ့လာနိုင်စေရန် ပြန်လည် စုစည်းပေးလိုက်ရပါသည် ။
GENERAL ( အထွေထွေ လေ့လာနိုင်ရန် )
Coursera: Take courses created by top educational institutions
edX: Take online courses from the world’s best universities
Udemy: Learn real world skills online
MasterClass: Take online classes from the world’s best
FutureLearn: Enjoy free online courses from top universities
Savvy: Get personal lessons over one-on-one video
Khan Academy: Learn almost anything
Guides: Explore interactive guides
Simplilearn: Grow your career with new skills
Highbrow: Learn with bite-sized email courses
Cudoo : Take online self-study courses
Coursmos: Learn new skills to drive your career
TED-Ed: Learn fromalibrary of interactive videos
Lynda.com: Learn new skills taught by industry experts
The Big Know: Take free courses from world-class brands
Curiosity: Be inspired by the web’s best learning videos
iversity: Take free online courses from experts
Curious: Get customized lessons delivered to your inbox
Lifeliqe: Browse interactive 3D models for K-12 subjects
MIT OpenCourseWare: Open MIT course content
AnkiApp: Study flashcards in your downtime
Anki: Remember anything with flashcards
Alison: Empower yourself with new workforce skills
Study.com.: Watch and learn with short and fun videos
The Open University: Obtain high-quality university education
Open Yale: Find lectures from selected Yale College courses
WikiHow: Learn how to do anything
StudyBlue: Study with online flashcards
Forge: Learn the latest skills one-to-one NEW!
TECHNOLOGY ( နည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာနိုင်ရန် )
Codecademy: Learn to code interactively for free
Treehouse: Learn coding and web design
Py: Learn Python, Java, Swift, HTML & CSS, R, SQL
Swift Playgrounds: Learn serious code on your iPad
Codeplace: Learn Ruby on Rails by building real world apps
SitePoint Premium: Becomeabetter web developer
CareerFoundry: Take courses to launch your tech career
CodeUpStart: Learn to code by creating real startups
Exercism: Level up your programming skills
Egghead: Learn the latest web development frameworks
Code4Startup: Learn to code by creating real life startups
CodinGame: Step up your coding game
Pencil Code: Learn programming inacreative way
Code School: Learn by doing with hands-on courses
Thinkful: Becomeadeveloper with 1-on-1 mentorship
BaseRails: Master Ruby on Rails and other web technologies
Dash: Learn to code awesome websites
Free Code Camp: Learn to code and help nonprofits
Code-Free Startup: Build apps with the skills you already have
One Month: Learn how to code in one month
Udacity: EarnaNanodegree recognized by industry leaders
Cloud Academy: Master cloud computing
Drupalize.Me: Learn Drupal with video tutorials
Trinket: Learn Python with all-in-one code editor
Livecoding.tv: Watch coders live as they build products
Code.org: Learn computer science
TechChange: Learn skills in technology
The New Boston: Watch free computer and technology tutorials
Mimo: Learn how to code on the go
Learn Code the Hard Way: Learn the basics of computer programming
Encode: Learn to code on your iPhone and iPad
Programiz: Simplest programming tutorials for beginners
CREATIVE ( တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စေရန်)
CreativeLive: Watch live online creative classes
Skillshare: Learn creative skills in just 15 minutesaday
Reedsy: Take free online writing and publishing classes
Facebook Media: E-Learning courses for journalists
Envato Tuts+: Discover free how-to tutorials
Instructables: Follow DIY tutorials
Sywork: Watch live illustrators
Squareknot: Explore guides to help you do anything
Ctrl+Paint: Teach yourself digital painting
LANGUAGE ( ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာနိုင်ရန် )
Busuu: Practice language skills with native speakers
Lingvist: Learnalanguage at light speed
Lang-8: Have native speakers support your learning
Babbel: Learn to speak, write, and understandanew language
Rype: Choose from hand-picked language teachers
Memrise: Learn languages and vocabulary
ELSA: Your virtual pronunciation coach
Vocabulary.com: Improve your vocabulary
Tandem: Find native speakers to practice together
Chineasy: Learn how to read Chinese characters
Simply Learn Languages: Learn fromanative speaker
Clozemaster: Learn language in context
TeamSpanish: Learn Spanish fast for free
LingQ: Learn languages from content you love
Fluentu: Learn with with real-world video content
Reverso: Translate and learn
PLAY ( အနုပညာ တီးခတ်လေ့လာရန် )
Simply Piano: Learn piano with your favorite songs
Pianu: Learn how to read music and play chords
Yousician: Learn to play guitar, piano, bass, and ukulele
Chesscademy: Learn how to play chess
LightNote: Learn just enough essential music theory
Fretello: Amplify your guitar skills
BUSINESS ( စီးပွားရေးဆိုင်ရာလေ့လာရန် )
Startup Patterns: Get bite-sized startup lessons
Primer: Take marketing lessons from Google
WixEd: Learn how to launch your own web business
Platzi: Take classes on business, marketing, and more
Digital Garage: Learn with free tutorials from Google
Careersofia: Real-time sales coaching inside of Salesforce
Social Media Academy: Up your social media marketing game
DATA ( အချက်အလက်များလေ့လာရန် )
DataCamp: Learn R, Python or data visualization
DataQuest: Learn data science in your browser
Datamonkey: Learn SQL and Excel for data analysis
ADVICE ( အကြံပြုချက် )
Quora: Get answer to any question
Wonder: Get help of expert researchers
Coach.me: Get instant coaching for any goal
Sensay: Get real advice from helpful humans
Clarity: Get on-demand business advice
Codementor: Get instant help from expert developers
AirPair: Get software help
Whale: Ask questions, watch answers
BRAIN ( ဉာဏ်စမ်း)
Lumosity: Discover what your brain can do
Elevate: Train your mind and improve your skills
Peak: Level up your brain
MATHS ( သချာၤဆိုင်ရန်လေ့လာရန် )
Mathspace: Your online textbook and workbook
iMathematics: Your personal math tutor
Algebrarules: Find the rules of basic algebra in one place
TYPING ( စာရိုက်ကျွမ်းကျင်စေရန် )
Typing.com: Learn typing for free
TypeRacer: Test and improve your typing skills
DANCE ( အကပညာ လေ့လာရန် )
STEEZY: Becomeabetter dancer
SING ( အဆို လေ့ကျင့်ရန် )
Vanido: Your personal singing coach
credit to http://learnsomethingnew.co/
Starting Java program by using Netbeans
April 4, 2016 chitkoko	Leaveacomment Uncategorized
Netbeans program ကို ဖွင့်လိုက်ပါမည်။
အနီရောင်နေရာကို နှိပ်ပြီး Start Page ကို ပိတ်လိုက်ပါမည်။
အနီရောင်နေရာကို နှိပ်ပြီး New project ဖွင့်ပါမည်။
Java ကိုနှိပ်ပြီး Java Application ကို ရွေးကာ Next ကို နှိပ်ပါမည်။
Project Name နေရာတွင် hello ဟု ရိုက်ပါမည်။ မည်သည့် နာမည် မဆို ပေးနိုင်ပါ သည်။ Project Location နေရာတွင် Java Project ကို ရိုက်ပြီး Finish ကို နှိပ် ပါမည်။ ကြိုက်သည့် နေရာကို ရွေးနိုင်ပါသည်။
Package name သည် hello၊ File name သည် Hello.java၊ Class name သည် Hello ဖြစ်ပါမည်။
ဟု ရိုက်ကာ အစိမ်းရောင်မျှားကို နှိပ်ပါမည်။
အောက်ဆုံး အနီရောင်အကွက် နေရာတွင် Hello world! ဟုပေါ်ပါမည်။ ယခုအခါ Netbeans ကို အသုံးပြုပြီး Java program တစ်ခုရေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
Starting Java program by using Eclipse
Eclipse ကိုဖွင့်လိုက်ပါက workspace ကိုတောင်းပါမည်။ workspace သည် project ရေးရန်၊ သိမ်းရန်နေရာ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်သိမ်းမည့်နေရာ ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးနိုင်ပါသည်။
Java Project folder ကိုရွေးလိုက်ပါသည်။ မေးခွန်းမှာ ဖွင့်တိုင်း မေးနေ မည်ဖြစ်သောကြောင့် select လုပ်လိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် နောင်ဖွင့် တိုင်း မမေးတော့ပါ။ O K ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
Welcome screen ပေါ်လာပါမည်။
ရွေးရန်နေရာတွင် Java အောက်မှ Java Project ကိုရွေးပြီး Next ကို နှိပ်လိုက်ပါမည်။
Project name နေရာတွင် ကြိုက်သည့်နာမည် ပေးနိုင်ပါသည်။ hello ဟုပေးလိုက်ပါမည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သောကြောင့် Java သို့ပြောင်းမလားဟု မေးပါမည်။ Eclipse ဖြင့် C စသည်တို့ကိုလည်းရေးသားနိုင်သဖြင့် Java or C စသည့် ရေးမည့် language ကိုရွေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောင်အခါ မေးခွန်း မမေးရန် အမှန်ခြစ်ပြီး Yes ကိုနှိပ်လိုက်ပါသည်။
hello project ပွင့်လာပါမည်။
ထပ်ပြီး New ကိုနှိပ်ပါမည်။
Package သည် ကိုယ်ရေးသော Files များကို တစ်နေရာတည်းတွင် သိမ်း ဆည်းထားပါသည်။ Package ကိုအမြဲဖွင့်သင့်ပါသည်။ မဖွင့်လဲ ရပါသည်။ ယခု Package ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမည်။
ဘာမှမပြောင်းဘဲ Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမည်။
ထိုအခါ hello project အောက်တွင် hello package ပေါ်လာပါမည်။
hello package ကိုရွေးပြီး New ထပ်ဖွင့်ပါမည်။
ယခုအကြိမ်တွင် Class ကိုရွေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါမည်။
Name နေရာတွင် ကြိုက်သည့် နာမည်ရေးနိုင်ပါသည်။ ယခု hello ဟု ရေးလိုက်ပါမည်။ ထို့နောက် အနီပြထားသောနေရာကို select နှိပ်ပြီး Finish ကိုနှိပ်လိုက်ပါမည်။
ထိုအခါ အသင့်ရေးပြီးသား hello.java file ကိုရပါမည်။ ထို file တွင် java file တွင် မပါ မနေရ လိုအပ်သော code များ ပါပါမည်။
Package name သည် hello၊ File name သည် hello.java၊ Class name သည် hello ဖြစ်သည်။ File name (hello) နှင့် Class name (hello) သည် အတိအကျတူရပါမည်။ စာလုံးအကြီး အသေး အားလုံးတူရ ပါမည်။ မတူပါက java program ကို run မရပါ။
(// TODO Auto-generated method stud) သည် comment ဖြစ်ပါ သည်။ Comment သည် ကိုယ်ရေးထားသော code မှာ ဘာအတွက်ရေး ထားသည်ကို မှတ်စု မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မပါလဲ ရပါသည်။ သို့သော် program ရေးပါက comment ရေးသင့်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်မှတ်မိရန်နှင့် လူအများနှင့် အတူရေးပါက ဘာရေးထားသည်ကို သိနိုင်ပါသည်။
Line6သည် comment ဖြစ်သည်။
Line7သည် java code ဖြစ်သည်။ ထို code ကိုရေးထည့်ပေးပါမည်။
Run ကိုနှိပ်ပြီး ကျလာသော menu မှ Run ကိုနှိပ်လိုက်ပါသည်။ ထိုအခါ ပုံပါအတိုင်း မေးခွန်းမေးပါမည်။ Save မလုပ်ဘဲ Run သောကြောင့် မေး ခြင်းဖြစ်သည်။ အမြဲ save လုပ်ပြီးမှ run ရန် select မှတ်ပြီး OK ကိုနှိပ် လိုက်ပါမည်။
ထိုအခါ အနီပြထားသောနေရာတွင် Hello world! ဟုမြင်ရပါမည်။ ထိုစာ သည် java program တွင် အမှားမရှိဘဲ အလုပ်လုပ်သောကြောင့် ပေါ် လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ မပေါ်ပါက error ရှိကြောင်းသိနိုင်ပြီး ပြန်ပြင်ရ ပါမည်။
ယခုအခါ Eclipse ဖြင့် Hello world! ဟုဖော်ပြမည့် program တစ်ခုကို ရေးသားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား project အသစ်များကိုလည်း ယခုအ ဆင့်များအတိုင်းပြုလုပ်ပြီး ရေးသားနိုင်ပါသည်။
History and Type of Programming Introduction
March 29, 2016 chitkoko	Leaveacomment Programming, Software
History and Type of Programming Introduction Part 1
Author: Thet Oo Zin
History and Type of Programming
This guild is only for Introduction.
1970 မတိုင်ခင်က PC (Perseonal Computer) မပေါ်သေးပါ။ Mainframe ခေါ် Computer အကြီးများသာရှိပြီး size မှာ အိမ်တစ်အိမ်၊ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းစာမျှ ကြီး မားပါသည်။ Computer တွင် Hardware and Software ဟု နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ Hardware သည် လူ၏ကိုယ်နှင့်တူပြီး လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို ပြုလုပ်ပါသည်။ Software သည် လူ၏ဦးနှောက်နှင့်တူပြီး Hardware(ကိုယ်)ကို လှုပ်ရှားရန် ခိုင်းစေပါ သည်။ Hardware သာရှိပြီး Software မရှိပါက သတိမေ့နေသူကဲ့သို့ဖြစ်နေပါမည်။ Software သာရှိပြီး Hardware မရှိပါက လေဖြတ်သူကဲ့သို့ဖြစ်နေပါမည်။ နှစ်မျိူးစလုံး ရှိမှသာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါမည်။ အလွယ်အားဖြင့်ဆိုသော် လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်စမ်းသပ် နိုင်သမျှသည် Hardware ဖြစ်ပြီး မကိုင်တွယ်မစမ်းသပ်နိုင် သို့သော် အသုံးပြုနိုင်သမျှ သည် Software ဖြစ်သည်။
Hardware သည်တဖြေးဖြေးတိုးတက်လာပြီး သေးငယ်လာပါသည်။ Mainframe တစ်ခုတွင် Operating Software တစ်ခုရှိပါသည်။ Software ကို နှစ်မျိူးခွဲနိုင်ပါသည်။
Operating Software သည် လူတစ်ယောက် လှုပ်ရှားသွားလာမှုကို ထိန်းချုပ်သလို အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Application Software သည် Burmese, English စကားများကို ပြောနိုင်သလို အလုပ်လုပ်ပါသည်။ Computer တွင် Operating Software သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ Application Software သည် မရှိမဖြစ် မဟုတ်ပါ။ မရှိလဲရပါသည်။ ရှိလျှင်ပိုကောင်းပါသည်။
PC(Personal Computer)များ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ computer တစ်ခု တိုင်းတွင် Operating Software တစ်ခု မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါသည်။ ထိုအချိန်က Hardware ထုတ်လုပ်သူမှာ IBM ဖြစ်ပြီး Microsoft က software ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Apple မှ ကိုယ်ပိုင် computer များထုတ်လုပ်ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစပြီး Hardwware and Software နှစ်မျိုးကွဲသွားပါသည်။ အခြား company များက IBM ၏ Computer နှင့်တူသော Hardware